Iyo nyaya inonakidza kwazvo yakataurwa naFrank yaive kuvhurwa The Weather Channel. Sezvakanaka sezvazvinonzwika, kambani iyi yaibuda mari yakawanda uye Frank akati aive nemaputi epinki emunhu wese mutangi rake. Akatora mukana, zvakadaro, ndokutaurirana muripo wega wega pamakambani emakambani akachinja iyo indasitiri yese! Yakatangisa imwe yenzira dzakabudirira kwazvo mu cable terevhizheni. Dai anga asiri kurwisa kenza yehuro, isu tingave takave neLandmark News Network pachinzvimbo chaTed Turner's CNN.
Vanhu havazive nezvaFrank Batten nekuti aive akanyarara, ane hunyoro philanthropist. Ndinoyeuka apo kambani yakamanikidza Frank kumutsidzira mahofisi ake uye kubvisa pasofa yakarohwa uye tafura yaaive nayo kwemakore akawanda kudaro. Aive shasha yechokwadi kukambani, kunharaunda uye kunyangwe vanhu. Munguva yekuparadzanisa, akaisa hupenyu hwake panjodzi uye akaramba achitaura nekuda kwekubatanidzwa nekuti ndizvo chaive chinhu chakakodzera kuita.
Izuva rinosuruvarisa kwandiri uye runyararo rwangu rwunoenda kumhuri yake, kunyanya Frank Batten Jr.Ndinodada kuti ndakasangana naFrank Batten, Sr. Kana ndichiyera kubudirira kwevanhu, zvinowanzo kupokana nezvandinorangarira nezvaFrank. Aive nemwero, achishanda nesimba, aionga, aibata vashandi vake mushe mushe mushe, uye achiri kugona kusimudzira mabhizinesi ake zvisingaite. Hapana akamboyera uye handina chokwadi kuti chero munhu achazombozviita!